အမေရိကန် တွင် ဆံသဆရာ တဦး ထံမှ လူပေါင်း (၉၁) ဦးသို့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုဖြစ်ပွား – Let Pan Daily
ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့ ဆံသဆရာ တစ်ဦးဟာ ရောဂါလက္ခဏာ ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ ၈ ရက်ခန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းရဲ့ ဖောက်သည်တွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၉၁ ဦးကို ကူးစက်စေခဲ့တယ်လို့ မစ်ဆိုရီမြို့ ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ယခု ကူးစက်မှုဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကြားက စီးပွားရေးတွေပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တစ်ခုအဖြစ် ကူးစက်မှု ပိုမိုများပြားလာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကူးစက်မှု မှာ အဆိုပါ ဆံသဆရာဟာ ၈ ရက်အတွင်း ဆံပင်လာညှပ်သူ ၈၄ ယောက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး ၇ ယောက်ကတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနက ပြောဆိုထားပါတယ်။
အဆိုပါ ဆံသဆရာ ရဲ့ ကူးစက်မှုရာဇဝင်ကို မသိရှိရသေးပါဘူး။ ဘယ်လိုကူးစက်လာလဲဆိုတဲ့ ဇစ်မြစ်ကို အဖြေရှာမရပေမယ့် ခရီးသွားလာရခြင်းကနေ ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ကနဦးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါဆံသဆရာဟာ မေလ ၁၂ ရက်နေ့ကနေ စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါအချိန်မှာ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေနဲ့ အလှပြင်ဆိုင်တွေကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
A stylist wearingaprotective mask and gloves cutsacustomer’s hair atabarber shop in Coral Gables, Florida, U.S., on Monday, May 18, 2020. Florida Governor Ron DeSantis announcedapartial re-opening order in Miami-Dade county, the two counties hardest hit by the coronavirus outbreak. Photographer: Jayme Gershen/Bloomberg via Getty Images
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိ အချိန်ထိ လူပေါင်း ၉၆၀၀၀ ခန့် ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကူးစက်သူအရေအတွက်ကတော့ ၁.၆ သန်းခန့်ရှိပါတယ်။ မစ်ဆိုရီမြို့မှာတော့ ကူးစက်သူပေါင်း ၁၂၀၀၀ နဲ့ သေဆုံးသူ ၆၀၀ ခန့်ရှိတယ်လို့ ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေက ထုတ်ပြန်ချက်ထားပါတယ်။
မလေးရှား ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၀၀၀) ကျော်ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူမည်